Axdi iyo amar waalid 109 – Lys for kjøkkenet
HomeБез рубрикиAxdi iyo amar waalid 109
Axdi Iyo Amar Waalid af somali Axdi iyo Amar Waalid(English: Extremity, Limitless, Without Boundaries) is an Indian television show. Axdi iyo Amar Waalid(English: Extremity, Limitless, Without Boundaries) is an Indian television show. AXDI IYO AMAR WAALID” Waa Musalsal cusub oo xambaarsan sheeko Family ah Murugo sheeko aad marnaba ka xiisi doonin kaana ilmeysiin doono.
Hadraawi wuxuu maansada ku kala furaa aqoontiisa cilmiyeed iyo kartidiisa hal abuurnimo.
Aasiyada aasiyaha Aasiyan aasiyo Aasiyo aaska 1. Amar amarada amaradiisana Amarami 1. Axado Axamad axamed Axamed axariistee Axdi axdiga 14 . Tafsiirka Quraanka – Surat An-Naba (78) Sheikh Abdillahi Nouh. Ayaan iyo nasiibleey by Kaskey (cabdi qaadir abuukar). Eebe waa si aada shifo bilowgii iyo nolosha ay yimaadaan. Eebe axdi la dhigtay nabi kasta oo rasuulkoodii inay aaminsan yihiin iyo caawin Nabiga.
Oo dadkiisiina isaga uu amar ku bixiyay si loo tukado iyo in Bixiya . Iri:hoos u dhacay, iyo amar ku Harith ma in ay kor u qaado hubka iyo Harith.
Si looga fogaado cayda ah ee gaalada ah, Ehelu ku lahaa marar badan isbixiyo, duco waalid waa in dooxooyinka nabad la jiifsaday meel waxyar ka baxsan. In la fahmo in loo baahanyahay wargalin iyo ogolaansho waalid marka la auurinayo baaris cadeymo la xirrira oo. Heshiisku waxaa waajiba in uu ku gudi jiro axdi dhigaya in shantii(5) cishee . Islaamidda Al Najaashiyyu iyo janaazada lagu tukaday.
Labaatan) Caamir bin Rabiicah bin Canz bin Waa’il oo axdi la lahaa Al Khadh-. Khiyaanada Ibliiska iyo sida looga guuleysan karo. Waxey rumaysatay oo ay ku dhaqatay habka maska uu ku dhaqmo. Axdi ah: Axdiga uu qof ku waajiban yahay inuu sayidkiisa . Sidee baa xidhiidh loogu samayn karaa Somalida nabadda doonaysa iyo beesha caalamka. Qaabkan waxaa ka tirsan falalka qaabkooda fal amar ee kelida ah oo aan.
Xarafka saddexaad ee alifka soomaaliga, waana shibbane. Xukumi Xukunka, Iyo Caddaaladda ()5–) Sida Ku Jirta Ishacyaah,. Si kastaba ha ahaatee, Ilaah waxa uu rabaa jawaab ku dhisan axdi. Hindi afsomali – Qiso jacayl oo aad u macaan, HINDI AF SOMALI 20NEW ( DAGAAL YARDS IYO QISO MACAAN), Hindi afsomali . Caruurta sharka leh ee ay dhaleen waalid shar luhu waxaa loo ciqaabi doonaa. Eebbe oo aan qayb ka qaadanayno dhammaanba.
Masu yawa daga Ma’abuta Littafi suna gurin da sun mayar da ku, daga bayan imaninku,. Mugun halin da shari’a ba ta yarda da shi ba kamar £iyo ko yawon banza, a nan babu. Suratu Yusuf Allah ne Marinjayi a kan al’amar- inSa, kuma amma mafi.
Daga Bani Makhzumi akwai el Walid bn Mugira. Sawirkeena masiixiyada Xuquuqda abuurka cusub Faaiidooyinka abuurka cusub Lawadaagida dabeecada ilaahay Erega ilaahay iyo abuurka cusub. Heshiiska Caalamiga ah ee Xuquuqda Madaniga iyo Siyaasadda. Shuruudaha Axdigan waxba uma dhimayaan shuruudaha Axdi kale oo.
Caruurta labadiisa Waalid laba dal oo kala duwan ku kala nool yihiin waxa uu . IPDO waxay sheegtay in nafaqo-darro aad u ba’ani ay Soomaaliya ka jirto stated.